DARYEELKA HABBOON IYO KALANDAR-BEEREEDKA - DHIRTA DAWOOYINKA
Beeraha kalendula oo lagu beerayo abuurka geedo badanaa way ka adag tahay marka la furo dhulka, laakiin habkani, dhirta ayaa horay u beeray.
Beeridda abuurka ah geedo waa wax saameyn ah haddii aad rabto in aad koro noocyo yar.
Waqtiga beeraha ee caadiga ah
Beeridda abuurka ah ee geedo qaadataa waqtiyo kala duwan. Wixii beeridda hore ee dhulka - dhammaadka March-April, ka hor inta jiilaalka - dhamaadka dayrta. Beeridda xilliga jiilaalka ayaa la doorbidi karaa haddii aad filayso in la soo dhaafay caleemaha iyo ubax.
Ciid: diyaarinta iyo daryeelka
Calendula marka la beero, iyo daryeelka dheeraadka ah, ma keento dadka deggan xagaaaga dhib badan. Habka ugu habboon ee loo isticmaalo beeritaanka weelasha leh godadka dheecaanka.
Ciidda waa la iibsan karaa (oo loogu talagalay dhirta dhirta) ama adiga ayaa isku diyaarin kara. Xaaladda dambe, qaado hal qayb oo sod leh, hal ciid, saddex qaybood oo caleen ah iyo humus. Isku daridkan fudud wuxuu ku haboon yahay calendula.
Abuurka kalendula waxaa lagu aasaa ciidda saddex sintimitir. Kontaynarada waa in lagu daboolaa foorno. Si loo ilaaliyo qoyaanka ciidda, waraabinta si joogto ah ayaa loo baahan yahay, taas oo lagu kabi karo mashiinka.
Waa muhiim! Qoyaan xad dhaafka ah waxay abuuri doonaan geedo yaryar.
Bacriminta caleemaha dhalinyarada waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo bacriminta adag ee loogu talagalay geedo, oo leh marxalad ah hal mar labadii toddobaadba mar.
Kontaroolada leh geedo waa in lagu kaydiyaa qolka heerkulka aan ka hooseeynin + 15 ° C. Calaamaduhu waxay muuqdaan toddobaad ka dib markii la beero, laakiin ha iloobin inay hubiyaan in qolku uusan lahayn heerkulka iyo qorshaha.
Calendula - waa warshad adag oo u adkaysata heerkulka hooseeya. Kama cabsanayo dhaxan (illaa -5 ° C), waxayna dareemeysaa si isku mid ah beerta iyo beerta.
Ma taqaanaa? Calendula waxaa jecel yahay Marguerite Valois, Boqorka Faransiiska, qolkeeduna badanaa waxaa lagu qurxiyey bustayaal kuwan ah ubaxyo jilicsan. Boqoradda Navarre waxay ku riyaaqday quruxda aan qabyada lahayn ee kalendarka, iyaga oo ku sharxay qoraalladeeda. Muuqaal ah Margarita oo leh boodhka calendula ee gacmaheeda ayaa qurxiya Beerta Luxembourg ee Paris.
Sida wakhti go'an, marka ay ka fiican tahay in lagu beero abuurka calendula ee dhulka u furan, ka dibna waad go'aamin kartaa naftaada, oo ku salaysan fududeynta shakhsi ahaaneed.
Marka miraha beerashada guga lagu beeray April, iyo dayrta - xilliga qaboobaha, bisha October. Guga, waxaad ku hubin kartaa diyaargarowga ciidda beeritaanka sida soo socota: ku hay burqaan dhulka ah ee timirtaada oo ka dhaji dhererka mitir. Haddii qof si sahlan loo burburiyo, waxaad bilaabi kartaa inaad degto.
Doorashada meel lagu beero
Goobta ugu wanaagsan ee calendula waxay noqon doontaa goobo qorrax leh ama yar yar oo leh dhul leh bacrin ah, carrada lagu miiray. Hoosta buuxda, afkoda geedka ayaa si xoogan loo soo saaraa, ubaxuna wuu yaraa. Intaa waxaa dheer, meesha la doortay waa in laga ilaaliyo dabaysha, taas oo jabin dhuuban dhuuban.
Ciidda waxaa la diyaariyaa xilliga dayrta: humus waxaa la soo saaray (baaldi nuskiiba m2) iyo 20 g oo ah superphosphate iyo chloride potassium kasta. Guga, kaliya ka hor beerto, HOL waa lagu daraa (30 g / m²).
Waxaad ku beddeli kartaa HOL oo bacriminta ka soo dukaanka, ama qoyaan humus leh superphosphate iyo potassium sulfate (qaado qaado). Ka dib markii loo isticmaalo bacriminta, waxay qodayaan dhulka iyo heerka qadka.
Ka hor inta beerto abuurka calendula, go'aamiyaan qaabka beeritaanka.
Dhulka waa inay jeexjeexaan laba centimitir oo qoto dheer. Inta u dhaxaysa safarka iyo dhirta ka tago fogaan ah oo ku saabsan 40 cm loogu talagalay beerto ah.
Calendula waxaa lagu beeray by abuurka abuurka ciidda by saddex illaa afar centimitir. Beerto qoto dheer waxay yarayn kartaa biqilka abuurka.
Si loo beero daawooyinka, nidaamku waa uu ka duwan yahay: 10 cm inta u dhexeysa dilaacaha iyo 40 cm inta u dhaxaysa saf.
Daryeelka ciddiyaha ma aha wax ka adag dhirta kale. Daryeelka joogtada ah iyo hirgelinta dhammaan geedi socodka dhirta lagama maarmaanka ah ayaa kaa caawin doona inaad qurxiso beertaada iyo beeraha khudradda leh "suns" yar.
Xiiso leh Welshka ayaa go'aamiyay cimilada sida marigolds: haddii marigolds uusan si buuxda u furin aroortii, waxay noqon lahayd mid aad u badan, roob badana, iyo badda waxay horay u duufaan.
Waraabinta: dhammaan sifooyinka
Calendula - warshad oo jecel qoyaan aad u badan, sidaas darteed waxay u baahan tahay waraabinta joogto ah. Laakiin waxaa jira waxoogaa riwaayado ah: geedo marwaxed ah ayaa la waraabiyaa seddex ilaa afar jeer wiigii, laakiin dhirta qaangaarka ah waxay u baahan yihiin oo keliya waraabinta xilliga abaarta.
Xaaladaha caadiga ah, roobab caadi ah, waxaad biyaha ku dari kartaa laba jeer toddobaadkii. Isla mar ahaantaana leh waraabka, waxaa lagama maarmaan ah in la daboolo ciidda iyo ka saar caws.
Kalendarka quudinta wuxuu u baahan yahay 12 ilaa 14 maalmood. Ammophos (20-30 g / m²) ama Nitrofoska (70-80 g / m²), laakiin waa inaadan ku soo biirin, sababtoo ah isticmaalka joogtada ah wuxuu u horseedi karaa cudurada dhirta.
Haddii aad isticmaasho Bacriminta nitrogen, sidoo kale taxaddar: sababtoo ah xad-dhaafka walaxdan, ubaxyada ayaa noqda mid yar oo cirro leh.
Ka saarida ubaxyada ubaxyada
Wixii weyn ee maskaxeed iyo ubax calugula. Kala saarista inflorescences fadlan sii kordhin doonaa ubaxyada kalendula ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka, marka lagu daro, inflorescences cusub ayaa noqon doona mid weyn oo iftiin leh. Ha ku degdegin inaad iska tuurto qaybaha la soo saaray, waxay noqon doonaan kuwo faa'iido leh oo ah qaabka daawada.
Hal bil ka dib soo baxa geedo calendula bilaabmaa inuu Bloom. Uruuriyaan lorescences leh abuurka jawiga qallalan, oo ka saara sanduuqyada xad-dhaafka ah, kuwaas oo ku yaalla habka siman.
Haddii miraha aan la ururin bisha Agoosto, way isdifaaci doonaan. Ubaxa leh sanduuqyada la qalajiyey si ay u dhacaan. Seeds ayaa si taxadar leh loo soo qaatey, duubnaa bacaha wax lagu duubo oo lagu kaydiyaa meel qalalan, madow, hawo iyo meel diirran.
Digniin! Ubaxyada Calendula ee neefta neefta waa mid aan loo baahnayn - manka waxay ka dhalin kartaa falcelin xasaasiyadeed waxayna sii xumaynaysaa xaaladda caafimaadka.
Isku-dubbaridka kalendula ee dhirta kale
Heerka calendula (illaa 60 cm) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku beerato sida cawska nool ama xayndaab yar, xuduudaha hoose ee dhirta. Waxay u eegi doontaa fiicnaan doonta ubaxa quruxda ee quruxda leh.
Nidaamka midabka ee calendula (laga bilaabo kareemka ilaa dahabka) ayaa qurxin doona cawska Moorish iyo buurta Alpine. Warshadu waxay awood u leedahay in ay ka dhigto iftiin qorrax leh oo lagu beeray ubaxyo mugdi ah: buluug, blueberry-purple, burgundy, iyo calendula gaaban oo sii kordhaya ayaa si quruxsan u muuqda dheriyada, daaqadaha iyo dheriyada.
Guul, iyo ugu muhiimsan waxay noqon doontaa beerto faa'iido leh beerta ku xigta khudradda iyo dalagyada cagaaran. Calendula wuxuu u shaqeeyaa sida antiseptic ee ciidda taas oo uu korayo.
Waxay ka dhigaysaa ciidda ka timaadda cudurrada (kalluunka root) iyo dulin. Warshadu waxay ku haboon tahay dagaalka ka dhanka ah aphids, duqsiyo raspberry, quraanjada iyo dhogorta dhogorta. Wuxuu xoojiyaa difaacida dhirta kale.
Cayayaanka iyo cudurrada kalandar-gabka: ka-hortagga iyo daaweynta
Calendula marar dhif ah ayuu jiran yahay, cudurrada ugu caansan waa madow madow iyo xayrta maqaarka. Marka hore waxay saameeysaa caleemaha leh dhibco madow ama mugdi madow ah, calendula wuu istaagayaa horumarinta lakab cad oo dhan qaybta kor ku xusan ee warshadda bidix ee xagjirta budada ah oo ugu dambeyntii u dhinto.
Haddii aad aragto guuldarro waqti dambe oo aad u baahan tahay inaad qaado tallaabooyin degdeg ah, isticmaal fungicides: Fundazin, Topsin, Topaz.
Inkasta oo ay ugu fiican tahay inaanan bogsiin, laakiin si aad u qaadato tallaabooyin ka hortag ah - ka qaad cawska waqtigaa, nadiifi ciidda xilliga dayrta, ha ku dhaafin nitrogen iyo ilaalinta dalagga dalagga.
Waa inaadan ku korin hal meel isla dhaqan dhaqameed ka badan saddex sano. Dhir daawo oo aan la caawin karin ayaa loo baahan yahay in laga saaro oo la gubo.
Caymiska cayayaanka ee cayayaanka, marka laga reebo waa aphid. Calendheeda, sida haddii ay isu ururinayaan faa'iidada deriska. Si aad u bilaashid dhirta ka timaadda dulin, isku day inaad ku xoqdo Karbofos, Aktellik ama Antitlin.
Dhamaan qarniyadii dhexe, Calendula waxaa la cunay - waxay u adeegtay sidii buuxsamayey pies, waxaa lagu daray saladh iyo firiley, suxuunta ugu muhiimsan, iyo puddings diyaarisay.
Inta badan, waxaa lagu qiimeeyaa sidii dhir, maxaa yeelay waxay ahayd calendula bedelay sacfron, taas oo aan weli raqiis ahayn, isla markaasna, laga keenay dibadda, waxaa la heli karaa oo kaliya dadka hodanka ah.
Ujeedada daawooyinka, Calendula waxaa loo adeegsaday nalalka sida daawooyinka qadiimiga ah sida Galen, Avicenna, Amirdovlat, Amasiats iyo Kulliyadeedka Herbalist.